Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo sheegay inaan la aqbali doonin wax muddo kororsi ah | Somalia News
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo sheegay inaan la aqbali doonin wax muddo kororsi ah
JOWHAR (HALBEEG)- Guddoomiiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa sheegay in muddada xil heynta sharciga ah ee Madaxda Maamulkaas dhammaatay 9-kii Oktoobar maalin kahor, wixii hadda ka dambeeyana la qorsheynayo doorashada 4-sano ee soo socota.
Guddoomiye Cismaan oo wareysi siinayay laanta afka Soomaaliga ee BBC ayaa sheegay in Hoggaamiye Maxamed Cabdi Waare iyo Xukuumaddiisaba waqtiga uu ka idlaaday, sidaas awgeed dastuuri ahaan Baarlamaanka uu usii shaqeynayo si shaqada loogu wareejiyo Baarlamaanka labaad ee HirShabeelle.
“Dowlad Goboleedka HirShabeelle sida uu dastuurka ku dhigan waa in 4-tii sanaba la qabto doorasho lagu soo dhisayo maamul qaata waqti kale, waa in lagu dhaqaaqaa fulinta sharciga oo na siiyay shaqada aan qabanay 4-tii sano ee lasoo dhaafay, Xukuumadda waqtigeeda halkaas ayuu ku dhamaaday waxaa kaliya howsha sii wada Baarlamaanka oo ku simaya Baarlamaanka cusub sida ku xusan qodobka 40-aad ee dastuurka Dowlad Goboleedka HirShabeelle” ayuu yiri Cismaan Barre Maxamed.
Guddoomiye Cismaan Barre ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in loo hoggaansamo fulinta sharciga oo ah waxa lagu wada joogo masuul walbana uu xilka uu hayo ku hayo.
“Aniga waxaan guddoomiyihii golaha sharci dejinta, hayadda sharcigana ugu sarreeyo halkanna waxaan ku joogaa sharci dastuurku meelnaba ka qori maayo, muddo korodhsi. habkii doorashooyinkii ayaa socda madaxweynuhuna wuxuu magacaabay guddi soo xulid baarlmaanka labaad, hadda wakhti lama hayo oo habkii ayaa socda. Haddii ku darsi uu madaxweynuhu u baahnaa waxay ahayd in uu sannad ka hor ama lix bilood ka hor laga soo shaqeeyo”.
Dhanka kale hoggaamiyaha maamul gobleedka Hirshabelle ayaa dhowaan ka hor yimid jadwal ay dhawaan soo saareen guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle isaga oo sheegay in ay jiraan qodobo muhiim ah oo laga maarmaan ay tahay in la fuliyo ka hor inta la guda gelin geedi socodka doorashada.
Previous articleKooxda Paris Saint-Germain oo weli xiiseynaysa Cristiano Ronaldo… (Miyey Juve ogolaan doontaa inay iibiso CR7?)
Next articleSawirro: DF Soomaaliya oo ciidamo badan geysay xadka, kadib hanjabaaddii Kenya